Raharaham-pirenena ity! | NewsMada
Hihisatra ny minitra sy ny segaondra anio… Samy tsy handrin’ny rehetra ireo lalao nataon’ny ekipam-pirenena malagasy nandritra ity “Can” ity, saingy vao mainka tsindrin-daona amin’ny fihaonan’ny Barea amin’ny Voromaherin’i Tonizia, anio. Ampahefa-dalana kosa io! Efa anatin’ny ekipa valo mendrika aty Afrika, ary mbola manam-bintana tsara hisongadinana kokoa noho izany amin’ny dingana manaraka ny Barea.
Rariny raha toa ka lasa raharaham-pirenena mihitsy ity resaka “Can” ity. Naka fepetra manokana ny polisim-pirenena, handaminana ny mandritra ny lalao sy ny fety, aorian’izay. Eny fety! Manam-pinoana amin’ny fandresen’ny Barea avokoa ny Malagasy tsivakivolo, ka azo antoka fa ho avo roa heny noho ny hafaliana tamin’ny alahady alina teo, ny anio.
Misy ireo delegasiona, tarihin’ireo mpitondra fanjakana, lasa nanatrika ny lalao any Ejypta. Ny Malagasy rehetra manerana ny vazan-tany kosa, samy manomana izay fomba hiainany ity lalao manan-tantara ity.
Ny azo antoka aloha, tanteraka ilay “Miara-mirona”. Angamba tsy ilaina intsony ilay hoe “Fampihavanam-pirenena” fa efa tanteraka izy izao. Na raha mbola ilaina, dia ny ekipam-pirenena malagasy no hasaina hitarika azy fa tsy ny mpanao politika. Takona tanteraka izay adihevitra momba ny politika, ny finoana, sns, fa ny Barea izao no iraisana. Tsy kely tsy lehibe, miandahy miambavy, miara-mientam-po ho an’ny fandresen’i Madagasikara.
Hantenaina ary azo antoka fa hihitatra amin’ny sehatra hafa ity firaisam-pon’ny Malagasy ity. Hovoizina anatin’ny politika, ny toekarena, ny kolontsaina, ny sosialy, sns, ilay “miara-mirona”. Vitan’ny Barea ny tsy vitan’ny mpanao mazia!
Na inona na inona vokatry ny lalao anio, efa fandresena lehibe ary miezinezina ny azon’i Madagasikara hatreto, noho ny Barea. Aleo mitandrina ny toe-pahasalamana ihany anefa, ka handrindra ny fihetseham-po… Alefa Barea.